Imifanekiso eqingqiweyo yentsimbi kaGil Bruvel | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Uzalelwe eSydney (Australia) ngo-1959, kodwa wakhulela emazantsi eFrance. UGil Bruvel Waqala ukuzama ubugcisa e 9 iminyaka Utata wakhe, umenzi wekhabhathi owaziwayo njengoGil in mkroli iinkuni kunye uyilo yefanitshala, walusebenzisa olu lwazi kuyilo lobugcisa kwimifanekiso eqingqiweyo kwiminyaka kamva. Ngo-1974, uGil waqala izifundo zakhe kwiworkshop yokubuyisela ubugcisa eChateaurenard, eFrance, wafunda noMnumzana Laurent de Montcassin, efunda ubuchule beenkosi ezindala nezala maxesha , kunye nembali yobugcisa ukusuka kwinkulungwane ye-14 ukuya kweye-20.
Ukusukela ngoko ukuya phambili, waseka istudiyo sakhe eSt EUnited States, kwaye ukusukela ngoko ebehlala ngokusisigxina ukusukela ngo-1990.
Amava akhe ngamanye amfundise ukuthanda ulwazi ngobugcisa, kunye nokuphuhla ngokuqhubekayo iindlela ezintsha zokujonga nokwandisa ubuchule bakho bokwenza izinto.
Ndingumculi, njengoko ngumjelo wokukhupha izimvo kunye nokubonakalayo endihamba nako yonke imihla. Ukusukela ukuba ndingumntwana bendiqhubeka nokuhlola okwam okusekwe kwingqondo engekho zingqondweni, kwaye ndixhokonxwa kukuziqhelanisa nemihla ngemihla kusetyenziswa iindlela ezahlukeneyo zobugcisa. Ndinomdla kakhulu kuthotho lwam olutsha olunamanzi, imvakalelo eyoyikisayo eneentetho ezahlukeneyo, apho ndiziva ngathi ukuqala kwam, ngombono wokusebenzisa iiteyiphu njengemigca yamandla ukubonisa iindlela ezinqamlezileyo zobuhle kunye nentlungu, ngaphakathi nangaphandle, i-ephemeral nengunaphakade, abakwaziyo ukuyifumana yonke imihla.
Fuente [UGil Bruvel]
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Imifanekiso eqingqiweyo yentsimbi kaGil Bruvel